Video Archives - Nawalpur Dainik
Aug82021 by Nawalpur DainikNo Comments
सूर्यविनायक क्षेत्र धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणवाट अति महत्वपूर्ण छ। यो भक्तपुर नगरबाट २ कि।मी। दक्षिण सिपाडोल गाविसमा पर्दछ।यहाँको प्रसिद्ध सूर्यविनायक ९गणेश० मन्दिर लिच्छवि कालमा शिखर शैलीमा निर्माण भएको पाइन्छ। काठमाडौं, पाटन, बनेपा, भक्तपुर जिल्लाका भक्तजनहरू हरेक मंगलवार र माघ महिनामा ठूलो र्घुइंचोका साथ यस गणेश मन्दिरको दशनार्थ आउने गरेको पाइन्छ। सूर्यविनायकको पूजावाट भाग्य निर्माण हुने र सद्बुद्धि आउने आम धारणा रहेको छ। बोली नफुटेको तथा अस्पष्टता भएका बालबालिका सूर्य विनायकामा लगेर छोडिदिनाले अतालिँदै चिच्याउन थाल्ने र त्यहि चिच्याई पछि बोलीमा परिणत हुने जनविश्वास रहि आएको छ । यसका साथै हिड्न नजानेका बालबालिकालाई यहाँ ल्याएर छोडिदिनाले हिड्न थाल्छन् भन्ने गहिरो जन विश्वास रहि आएको छ । गणेशको दर्शन गर्लामा मनमा आनन्द आउनुका साथै मनले चिताएको पुग्ने बताइन्छ भने कसैकसैले यहाँ ...
Aug72021 by Nawalpur DainikNo Comments
वि’गत केही वर्षअघि देखि निकै नै नेपालीहरुबिच सामा’जिक सं’जाल टिकटक निकै नै लोक’प्रिय छ । यहांं सबै मानिसहरुले आफ्नो प्रतिभा पस्कने गरेका छ । कति मानिसहरु यहाबाट निकै नै भाइरल बनेका छन । त्यस्तै कयौ म्युजिक भिडियोहरु पनि यहि टिक टकबाट नै भाइरल हुने गरेका छन त्यस्तै अहिले पछिलो समय मा एकजना नाबालक पनि टिक टकमा उत्तिकै लोक प्रिय छ्न । झट्ट हेर्दा निकै नै अच’म्म लाग्ने यी बालक शा रीरिक रुपमा अलिक कम’जोर तथा अनौ’ठो देखिन्छन । उनको आँखा र मुख सामान्य मानिस भन्दा अलिक फरक रहेको छ । हेर्दा निकै नै क्युट देखिने यी बालकलाई टिकटभरी सबैले उज्वल भविष्यको शुभ कामना ओइ’रो लागेको छन । उनका भिडियो हरु टिक टकमा लाखौंले हेरि सकेका छ्न । त्यतिकै उनलाई लाइक गर्ने पनि लाखौं नै रहेका छ्न । त्यस्तै उनलाई आशीर्वाद दिने मानिस हरूको पनि कमि छैन । उनको घरमा बुबा, ममी र बहिनी रहेका छन । उनलाई धेरै मानिस हरुले नि...
Aug42021 by Nawalpur DainikNo Comments
हेल्मेट नलगाएका पारसले प्रहरीलाई थर्का,एका हुन कि प्रहरीले ठुलो अप,राधीलाई झै गरेको हो ? खुल्यो रहस्य (भिडियो सहित्)
गत शुक्रबार साँझ पूर्वयुवराज पारस शाह सडकमा हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकल चलाउदा विवा,दमा आएका थिए । महाराजगञ्जमा हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकलमा हिडेपछि उनलाई ट्राफिक प्रहरीले रोकेको थियो । ट्राफिक प्रहरीले सोधपुछ गर्न खोज्दा उनले जान्न जान्न भन्दै प्रहरीमाथि नै दु,र्व्यवहार गरेका थिए । उनलाई प्रहरीले सोधपुछ गर्दाको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइ,रल बन्यो । भिडियोमा जान्न जान्न भन्दै करा,एको आवाज प्रष्ट सुनिन्छ । यस्तै पारसलाई ट्राफिक प्रहरीले रोकेपछि उनकी छोरी कीर्तिका शाहले आफ्नो प्र,तिक्रिया सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत दिएकी छिन् । उनले ट्वीटरमा बाबु पारसमाथि प्रहरीले अप,मानजनक ब्यबहार गरेको बताएकी छिन् । उनले लेखेकी छिन् – ‘हेलमेट छुटेको बिषयलाई प्रहरीले मर्या,दापूर्वक व्यवहार गरि आफ्नो ड्युटी पूरा गर्नु पर्नेमा अपमा,नजनक ब्यबहार गरेको छ।’ यसै बिषयमा पुन्य गैतमले पनि आफ्नो बिचार राखेका छन हेर...
Jul252021 by Nawalpur DainikNo Comments
बिहे गरेको १ बर्ष नपुग्दै २१ वर्षीय युवती निर्मला राई जंगलमा भिडियो हेर्नुहोस…
इलामको माइ नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित कालीखोलाको भीर जंगलमा एकजना २१ वर्षीय युवती निर्मला राईको ला’स झु’न्डि’एको अवस्थामा भेटिएकी छ। उनको ला’स झु’न्डिए’को अवस्थामा शरी’रले माटोलाई छो’एको अवस्थामा भेटिएको भनेर माइती पक्षले बताएका छन्। यसलाई माइतीपक्षले शंकाको दृस्टीले हेरेका छन्। उनीहरू पनि अहिले घटना स्थलमा आइपुगेका छन्। उनी भीरबाट लडेर रुखमा अड्केको जस्तो पनि देखिन्छ र उनको साथमा एउटा डोरी समेत छ।उनले त्यहीँको स्थानीय वडा अध्यक्षको छोरीलाई बिहे गरेका थिए। उनको बिहे गरेको करिब एकबर्ष जति भएको थियो।घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर्न भनेर जिल्ला बाट इन्स्पेक्टरको टोली समेत आइसकेको छ। यसो हेर्दा झु- न्डि-एर नै म- रेको जस्तो देखिन्छ र च्याउ टिप्न भनेर आउँदा सुरुमा उनकै श्रीमानले देखेर बचाउन सकिन्छ कि भनेर डो- री का-टि’दि’एछन् र क- रा उँदै मान्छेहरू समेत बोलाएका रहेछन्,भनेर स्थानीय विनोद लिम्बूल...
Jul182021 by Nawalpur DainikNo Comments
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पार्टीभित्रको विवादका कारण देशमा संकट आइलागेको बताएका छन् । वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने बेलामा जनता समाजवादी पार्टी विभाजित हुँदा अरु पार्टीमा पनि समस्या देखिएको भन्दै उनले बताए । ‘हामी अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्यो,’ उनले भने, ‘हामी एकढिक्का भएको भए हामी जनता समाजवादी पार्टी आफैंले निकास दिन सक्थ्यौं, हामी आपसमा झगडा गर्न थाल्यौं, फेरि हाम्रा साथीहरु ठीक ठाउँमा आउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रतिगमनकारीको खड्ग प्रहारबाट मुर्छित बनेको प्रतिनिधिसभा र मुर्छित बनेका सांसदहरु फेरि ब्युँतिएको बताए । उनले त्यसका लागि सर्वोच्च अदालत, नागरिक समाज र मिडियालाई धन्यवाद दिए । अहिलेको संविधान आधा भरिएको र आधा खाली अवस्थामा रहेको भन्दै नेता भट्टराईले खाली गिलास भर्नुपर्नेमा झन् निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलील...
Jul132021 by Nawalpur DainikNo Comments
सामाजिक स’ञ्जालमा अहिले एउटा तस्बिर भाइरल भएको छ । नारायणघाट–मुग्लिङ सडक खण्डमा पहिरो गएको बेलामा जाममा परेका बेहुलाहरुको सामुहिक तस्बिर भा’इरल भएको हो । पहिरोले सडक अवरुद्ध पारेपछि बिहे गर्न हिँडेका जन्ती सहितका बेहुलाहरु अलपत्र परे पछि समय ब्य’तित गर्न तस्बिर खिचेको हुनसक्छ । सो तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जा’लमा भाइरल भएको हो । उक्त सडकखण्डमा अलपत्र परेका बेहुलाहरुको सामूहिक फोटो सामाजिक संजा’लमा भाइरल भएको छ । महामारीका कारण सरकारले निषेधाज्ञा लगाएकोले विवाह जस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम धेरै रोकिएका छन् । केही दिन अघि मात्र काठमाडौ उपत्यकामा निषे’धाज्ञा केही खुकुलो बनाइएको छ । निषेधाज्ञा खुलेका बेला असार १८ गतेको लगनमा वेहुली लिन हिँडेका वेहुलालाई पहि’रोले विचवाटोमै अलपत्र पारेको हो । बुधवार देखि परेको वर्षाले सो सडकखण्डको धेरै स्थानमा पहिरो गएको छ । पहिरोका कारण चितवनको नारायणघाट–मुग्...
(भिडियो अन्त्यमा छ) नेपालमा भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटक (सामाजिक सञ्जाल) का प्रयोगकर्ता बढेसँगै यसको दुरूपयोग पनि बाक्लिएको पाइएको छ। रमाइलो गर्ने र भाइरल हुने बहानामा केही व्यक्तिले जथाभाबी भिडियो बनाएर ‘अपलोड’ गर्दा व्यक्तिगत र संगठनात्मक गोपनीयता उदांगो भइरहेको प्रहरीको ठहर छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार कार्यालयभित्रै भिडियो बनाउने, बैंकका कर्मचारीले फाइल, पैसा र डकुमेन्टजस्ता सामग्री भिडियोमार्फत सार्वजनिक गर्ने, प्रहरी र नेपाली सेनाको बर्दीको प्रयोग गर्ने, ड्युटीमै भिडियो बनाउने, चित्त नबुझेका व्यक्तिको अ’श्लील भिडियो अपलोड गरिदिने प्रवृत्ति बढेको छ। ब्युरोका एसपी पशुपति रायका अनुसार साइबर अपराधमा आगो थप्ने काम टिकटकले पनि गरिरहेको छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल र युट्युब च्यानललाई व्यस्थित गर्न सकिने आवश्यक कानुन निर्माण नगरेका कारण प्रहरीको टाउको दुखेको छ। एसपी रायले टिकटक...
Jul72021 by Nawalpur DainikNo Comments
चितवन । पछिल्ला दिनमा चितवनमा छोरी चेली हराएका खबरहरु बाक्लै आउन थालेका छन् । चितवनकी सुजिताको रहस्यमय मृ त्यु भए लगत्तै अर्की चेली फेरी भरतपुरबाट बेपत्ता भएकी छिन् । नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकाको झपर्दीका जयश्वर सापकोटाकी २१ वर्षीया छोरी विना हराएपछि अहिले परिवार ठूलो समस्यामा परेको छ । असार १८ गते साँझ उनलाई ५ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवक प्रवेश कँडेलले आफ्नो घर लैजाने भन्दै विनाकै घरबाट स्कुटरमा राखेर बाबु आमाको सल्लाहमा नै निस्किएका थिए । तर आधा घण्टामा नै फर्किन्छु भनेर घरबाट निस्किएकी छोरी विना एक साता लामो समय हुँदा पनि नर्फकिएपछि परिवार तनावमा रहेको बाबु जयश्वर सापकोटाले फेसबुकमा एउटा स्टाटस पोस्ट गर्दै सबैलाई छोरी खोजीदिन आग्रह गरेका छन् । जयश्वर सापकोटाले छोरीको फटोसहित राखिएको सूचनामा असार १४ गते अपरान्ह साढे ४ बजे यही पोशाकमा घरबाट निस्किएकी विना सापकोटा अहिलेसम्म ...